Calaacalka Wenger: Difaacayagu is-miidaamis buu ahaa
HomeChampions LeagueCalaacalka Wenger: Difaacayagu is-miidaamis buu ahaa
Tababaraha kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa dhalleeceeyey qaab ciyaareedka difaaca kooxdiisa ciyaartii xalay weji-gabaxa foosha xun ay kala kulmeen ee ay 1-3 ku dawakhisay Monaco.
Saddex gool oo ay kala dhaliyeen Geoffrey Kondogbia, Dimitar Berbatov iyo Yannick Ferreira-Carrasco ayaa ugu filnaaday kooxda reer Faransiis ee Monaco in ay ku damaashaado garoonka Emirates ee Arsenal dhexdeeda, iyadoo uu goolka madiga ahna kooxda Gunners uu u dhaliyey Oxlade-Chamberlain.
Tababare Wenger oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu qiray in dhibaato badan ay kooxdiisa ka haysatay khadka dambe ee difaaca oo aan u habaysnayn qaab ay wax isaga difaaci karaan.
“Habeen xun ayay ahayd, waanse hambalyaynayaa Monaco. Way dagaallameen, is-difaaceen si fiican annagana cunahay na qabteen” sidaas ayuu yidhi Wenger oo u warramay Sky Sports.
Wenger waxa uu tilmaamay in kooxdiisu laba arrimoodba ay khalad ku samaysay, waxaanu yidhi: “Laba siyaaboodba khalad ayaanu u samaynay. Fursad ayaanu helnay oo kamaanu faa’iidaysanin, ismiidaamis ayaananu ahayn difaac ahaan. Waanu ogeyn wakhtigii nasashada in aanu u baahanahay is-dejin.”
Wenger waxa uu tilmaamay in ay dembiileyaal yihiin kooxdiisu, isla markaana ay difaacooda fureen oo ay weerar wada galeen daqiiqadihii u dambeeyey taasna lagaga dhaliyey goolka saddexaad.
“Ciyaarta si fiican ayaanu u maamulaynay, laakiin goolka ayay laad awood badan ku toogteen waanu dhashay, wax kastana iyagaa qaatay caawa (xalay).
“Waxa aad halkaa ka arkaysaa sababtii ay Monaco kaalinta koowaad ugaga soo baxeen groupkeedii. Aad ayay u habaysan yihiin, jidh ahaana ugu xoog badan yihiin.” Ayuu raaciyey Wenger.
Ka sokow in si xun loo garaacay kooxdiisa haddana waxa uu Wenger diiday in uu meesha ka saaro in kooxdiisu wali fursad u haysato in ay u soo baxdo wareegga xiga, isla markaana ay ciyaarta dambe ee ka dhici doonta garoonka Monaco ay ku soo badin doonto.
Motherwell – Celtic 0-2 – 26-11-2017 Highlights Betfred Cup Final